Haweenka Baarlamaanka Dowlada Fkmg oo ku dhawaaqay inay samaysteen Urur lamagac baxay Kulanka Haweenka Soomaaliya
» Haweenka Baarlamaanka Dowlada Fkmg oo ku dhawaaqay inay samaysteen Urur lamagac baxay Kulanka Haweenka Soomaaliya
Qaar ka tirsan Gabdhaha Baarlamaanka Federaalka kmg ee Soomaaliya oo kaashanaya haweenka ku jira Gudiga Dastuurka iyo gudiga dib u heshiisiinta ayaa kulan ay yeesheen waxa ay soo saareen inay samaystaan urur la yiraahdo Kulanka Haweenka Soomaaliyeed waxaana gudoomiye loogu doortay Xildhibaanad Qamar Aadan Cali.
Kulankani oo ka dhacay Xarunta kmg ee Dowlada Federaalka ee magaaladda Baydhabo ayaa sii balaartay oo lagu biiriyey haweenka afarta xaafadood ee magaalada Baydhabo oo gaaraya ilaa 150 haween ah ka dibna ay doorteen Gudoomiyaha Kulanka Haweenka Soomaaliyeed.
Xildhibaanad Khadiijo Maxamed Diiriye oo ka hadashay kulankaasi ayaa sheegtay inay fariin gaarsiinayso dhamaan haweenka Soomaaliyeed meel walba oo ay ku nool yihiin, waxaanu leenahay kasoo qeyb gala dhismaha cusub ee kulanka Haweenka taasoo looga dan leeyahay bay tiri sidii ay u heli lahaayeen hogaan mideysan.
Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa ku nuux nuuxsatay in beesha caalamka ay taageerto dowladda Federaalka kmg si bay tiri ay ugu howl gasho dhamaan dalka Soomaaliya, hadaanu nahay Haweenka Soomaaliyeed waxaanu si weyn u taageersanahay dowlada waxaana doonaynaa inay noqoto mid ku guulaysata dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska dalka.
Haweenka Soomaaliyeed ayaa udub dhexaadka u ah Bulshada iyagoo dhibaatada ugu badan ay soo gaareen mudaddii 16ka sanno ahayd maadaama caruurtooda, Ragooda, walaalahood iyo aabayaashood lagu laayey dagaaladii sakooye iyagoo usii dheereyd dil, dhac iyo kufsi balaaran oo loo geysan jiray Haweenka Soomaaliyeed. Talo haddii aad u baahan tahay booqo maamulka talooyin